အသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့ ကြယ်လေးတွေအတွက် လက်သီးကျစ်ကျစ်ဆုပ်ထားတယ်လို့ ဆိုလာတဲ့ မောင်မောင်အေး – Cele Snap
အသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့ ကြယ်လေးတွေအတွက် လက်သီးကျစ်ကျစ်ဆုပ်ထားတယ်လို့ ဆိုလာတဲ့ မောင်မောင်အေး
ေောငျမောငျအေးလို့ဆိုလိုကျရငျတော့ကတုံးနဲ့အသံပါဝါအားကောငျးကောငျးနဲ့ လူတိုငျးကငေးနရေလောကျအောငျ စကားပွောကောငျးတဲ့လူပဲဖွဈပါတယျ။ အနုပညာလောကမှာ နာမညျကွီးသူတဈယောကျဖွဈတဲ့ အစီစဉျတငျဆကျသူ မောငျမောငျအေးကတော့သရုပျဆောငျသိပျမလုပျပမေယျ့လညျး ပရိသတျတိုငျးနဲ့ မစိမျးတဲ့
ဆယျလီတဈယောကျပါပဲ။ထို့အပွငျမောငျမောငျအေးကတော့ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈကာကှယျ တိုကျဖကျြရေးလုပျငနျးတှမှော အငျတိုကျအားတိုကျပါဝငျနခေဲ့သူပါ။သူကိုယျတိုငျလညျး ပွညျသူနဲ့အတူ လှူကွမယျအစီအစဉျ၊ We Love Yangon အဖှဲ့ ၊Quarantine ဝငျနတေဲ့လူနာတှကေိုသှားရောကျဖြျောဖွရေေး စတာတှမှော ကို
ယျကြိုးမဖကျဘဲ ရှိသမြှအခြိနျပေးပွီး ဦးဆောငျလုပျကိုငျနသေူပါ။ မွနျမာနိုငျငံမှာဖွဈသှားခဲ့တဲ့အာဏာသိမျးတဲ့လုပျရပျနောကျပိုငျးမှာတော့ စကစဘကျကအလိုရှိနတေဲ့ ကြျောကွားတဲ့လူထဲမှာ မောငျမောငျအေးလဲ အပါအဝငျပဲဖွဈပါတယျ။ အာဏာသိမျးပွီးနောကျ စဈကောငျစီရဲ့ပွဈမှတျထားမှူကွောငျ့ ပွညျပသို့ ထှကျပွေးခဲ့ရ
ပါတယျ။ မောငျမောငျအေးက ဖဘေု့တျစာမကျြနှာထကျမှာ ပျေါပငျစာလေးတှကေိုရေးသားတတျသူဖွဈတာကွောငျ့ အမွငျမတူသူတှရေဲ့ ဝဖေနျခွငျးကိုခံရသူလညျး ဖွဈပါတယျ။ လှနျခဲ့တဲ့ရကျပိုငျးကဖွဈသှားခဲ့တဲ့ လူငယျ ၅ ဦးတိုကျပျေါကခုနျခခြဲ့တဲ့အကွောငျးနဲ့ပကျသကျလို့ ခုလိုပဲရေးသားလာခဲ့တာ ဖွဈပါ တယျ။ ဘယျနှဈ
နာရီမဆိုရဲ့ ၄၄ မိနဈ ရောကျခြိနျတိုငျးမှာ …အံ ၅ ခါ ကွိတျမယျ…. တောကျ ၅ ခါ ခေါကျမယျ….လကျသီးကဈြကဈြ တငျးတငျး ၅ ကွိမျ ဆုပျမယျ….အသကျတောငျပေးခဲ့ရဲတဲ့ ….ကွယျတှအေတှကျ ….ငါ ……ဒီလောကျတော့ လုပျနနေိုငျရမယျ….ငါ….ဒီထကျအမြားကွီး ပိုလုပျနိုငျပါစသေား… လို့ ရေးတငျခဲ့တာဖွဈ ပါတယျ.
သူရေးထားတဲ့ပို့ဈအောကျမှာတော့ အမွငျတူသူ မတူသူမြားနဲ့ စညျကားလို့နပွေနျပါတယျ။ ပရိသတျကွီးလညျး မောငျမောငျအေးရဲ့ နှိုးဆျောစာအတှကျ ဘယျလိုမွငျလဲဝဖေနျပေးခဲ့ကွ ပါအုံးနျော.
Source Mg Mg Aye
ေောင်မောင်အေးလို့ဆိုလိုက်ရင်တော့ကတုံးနဲ့အသံပါဝါအားကောင်းကောင်းနဲ့ လူတိုင်းကငေးနေရလောက်အောင် စကားပြောကောင်းတဲ့လူပဲဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာလောကမှာ နာမည်ကြီးသူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ အစီစဉ်တင်ဆက်သူ မောင်မောင်အေးကတော့သရုပ်ဆောင်သိပ်မလုပ်ပေမယ့်လည်း ပရိသတ်တိုင်းနဲ့ မစိမ်းတဲ့
ဆယ်လီတစ်ယောက်ပါပဲ။ထို့အပြင်မောင်မောင်အေးကတော့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ် တိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ အင်တိုက်အားတိုက်ပါဝင်နေခဲ့သူပါ။သူကိုယ်တိုင်လည်း ပြည်သူနဲ့အတူ လှူကြမယ်အစီအစဉ်၊ We Love Yangon အဖွဲ့ ၊Quarantine ဝင်နေတဲ့လူနာတွေကိုသွားရောက်ဖျော်ဖြေရေး စတာတွေမှာ ကို
ယ်ကျိုးမဖက်ဘဲ ရှိသမျှအချိန်ပေးပြီး ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်နေသူပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းတဲ့လုပ်ရပ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ စကစဘက်ကအလိုရှိနေတဲ့ ကျော်ကြားတဲ့လူထဲမှာ မောင်မောင်အေးလဲ အပါအဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အာဏာသိမ်းပြီးနောက် စစ်ကောင်စီရဲ့ပြစ်မှတ်ထားမှူကြောင့် ပြည်ပသို့ ထွက်ပြေးခဲ့ရ
ပါတယ်။ မောင်မောင်အေးက ဖေ့ဘုတ်စာမျက်နှာထက်မှာ ပေါ်ပင်စာလေးတွေကိုရေးသားတတ်သူဖြစ်တာကြောင့် အမြင်မတူသူတွေရဲ့ ဝေဖန်ခြင်းကိုခံရသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ လူငယ် ၅ ဦးတိုက်ပေါ်ကခုန်ချခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့ပက်သက်လို့ ခုလိုပဲရေးသားလာခဲ့တာ ဖြစ်ပါ တယ်။ ဘယ်နှစ်
နာရီမဆိုရဲ့ ၄၄ မိနစ် ရောက်ချိန်တိုင်းမှာ …အံ ၅ ခါ ကြိတ်မယ်…. တောက် ၅ ခါ ခေါက်မယ်….လက်သီးကျစ်ကျစ် တင်းတင်း ၅ ကြိမ် ဆုပ်မယ်….အသက်တောင်ပေးခဲ့ရဲတဲ့ ….ကြယ်တွေအတွက် ….ငါ ……ဒီလောက်တော့ လုပ်နေနိုင်ရမယ်….ငါ….ဒီထက်အများကြီး ပိုလုပ်နိုင်ပါစေသား… လို့ ရေးတင်ခဲ့တာဖြစ် ပါတယ်.
သူရေးထားတဲ့ပို့စ်အောက်မှာတော့ အမြင်တူသူ မတူသူများနဲ့ စည်ကားလို့နေပြန်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း မောင်မောင်အေးရဲ့ နှိုးဆော်စာအတွက် ဘယ်လိုမြင်လဲဝေဖန်ပေးခဲ့ကြ ပါအုံးနော်.
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဘေးလွတ်ရာကိုတိမ်းရှောင်နေရတာကြောင့် သူမအိမ်ကိုလွမ်းကြောင်း ၀မ်းနည်းစွာပြောပြလာတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်
အသက်ကြီးလာပေမယ့် အရွယ်မကျဘဲပိုတောင်နုလာတဲ့ မင်းသားရဝေအောင်ကို နာမည်ပြောင်လေးတစ်ခုပေးလိုက်တဲ့ ချောရတနာ